August 31, 2016 – Rohingya Language Foundation
Jonnot ollá Duaa Óu Allah (becók) aññí tortú Jonnot magir ar aññí tor hañsé faná saáir ooin ottú. (Arabic to Rohingya Dictionary) 1. Allah = Allah 2. Húmma= óu 3. Ínni = (becók) aññí 4. Ás-áalu = magir 5. Ka […]
Maa (mother) Ze Maa loi korib (hañsé) ó, Ducmon ó, íbar adoijja ó Mal zar hañsé ó, Tará hoçé gorib ó, Zar Maa zinda ó, Íba bicí kismot wala ó. Alla tala beggún ór mal oré héfazot rakóuk -Aameen
ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ရခိုင်လူဦးရေ အများဆုံးရှိတဲ့ မြို့လေး တစ်မြို့ ဖြစ်ပြီး၊ မြို့နေ လူဦးရေ ၆၀% မှာ ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်ပြီး၊ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များသည် ဒုတိယ လူဦးရေ အများဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ချင်းလူမျိုး ၊ဟိန္ဒူ လူမျိုး ၊ မာရမာကြီးလူမျိုးတွေလည်း ရှိပါသည်။ ချင်းလူမျိုး တို့သည် ခရစ်ယာန် ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး၊ ဟိန္ဒူလူမျိုးများသည် ဟိန္ဒူ ဘာသာကို ကိုးကွယ်သူများဖြစ်သည်၊ ၄င်း အပြင် ရခိုင်မျိုးနွယ်ဝင် မာရမာကြီး လူမျိုးတွေလည်း ရှိပါသည်။ ၄င်း မာရမာကြီး လူမျိုးများ၏ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်မှာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များနှင့် တူသော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်သည် ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ့ နိုင်ငံနှင့် နယ်စပ်ချင်းထိစပ်လျက်ရှိပြီး ဘင်္ဂလားဒေခ်ျဘက်မှ […]